प्रहरीले सेवाग्राहीलाई दिनु पर्ने हरेक सेवा सहज रुपमा प्रदान हुन्छ : प्रहरी उपरिक्षक गंगा पन्त
फाल्गुन ७, २०७६ कविता खड्का
प्रहरी उपरिक्षक गंगा पन्तं । तस्बिर : कविता खड्का
पर्सा प्रहरी प्रमुखको रुपमा यस जिल्लामा देखिएको मुख्य समस्या र समाधानबारे प्रहरी उपरिक्षक गंगा पन्तंसंग गरिएको कुराकानी :
१) पर्सा जिल्लामा प्रहरी प्रमुख भएर आइसकेपछिको चुनौति के के देख्नु भएको छ ?
हरेक जिल्लाका आ–आफ्नै समस्या र चुनौतिहरु हुन्छन् । पर्सा जिल्ला खुल्ला बोर्डर भएको कारण क्रस बोर्डर क्राईम हुने सम्भावना हुन्छ । तराईका जिल्लामा महिला हिंसाका घट्नाहरु पनि अत्याधिक मात्रामा छन् ।
शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रणका साथै क्रस बोर्डर क्राईम र महिला हिंसाको अन्त्य गर्नु पर्सा जिल्लाको चुनौति हुन सक्छ ।
२) यहाँको महिला हिंसाको न्यूनिकरण कसरी गर्नु हुन्छ ?
कार्यालय प्रमुख महिला हुँदा महिलाहरुको सजह पहुँच स्थापित हुन्छ । प्रहरी कार्यालयमा कतिपय घट्नाहरु प्रहरीको व्यवहार सहज नभएको कारण महिलाहरु पीडित भएको महसुस गर्ने र सकेसम्म प्रहरीमा रिपोर्ट नदिने गर्छन् ।
म लुकेर बसेका महिलाहरुको समस्याहरु जनचेतनाको माध्ययमबाट आफूलाई मर्का पर्दा रिपोर्ट गर्न सक्ने वातावरण बनाउनमा ध्यान दिन्छु । कार्यालयमा आएका समस्याहरुको उचित समाधान गर्न प्रयास गर्छु । प्रहरीलाई महिलाको सहयोगीको रुपमा स्थापित गरी महिला हिंसा न्यूनिकरण गर्न सहज वातावरण सृजना गर्दछु ।
३) पर्सा जिल्लालाई कस्तो बनाउने लक्ष्य लिनु भएको छ ?
म यहाँ आउनु पूर्व कुनै योजना बनाएर आएको होइन । सरुवा भएको भोली पल्ट नै म यहाँ उपस्थित भइसकेको थिए । मैले कार्य गर्ने क्रममा तराईका जिल्लाहरुमा हुने महिला हिंसाका घटना, खुल्ला बोर्डरका कारण लागु औषध अपराध, क्रसबोर्डर क्राईमको बारेमा जानकारी पाइन्थ्यो । आज म स्वयम पर्सा जिल्लामा आउँदा ति सबै सुनेका समस्याहरु यर्थाथ नै भएको पाए ।
शिक्षाको क्षेत्रमा यहाँ अत्याधिक राम्रा विद्यालयहरु भएको र बालवालिकाहरुले पनि ज्ञान हाँसिल गरेको देखियो । अहिले स्थानीय सरकार गठन भइसकोले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसंग सहकार्य गरेर प्रहरी संगठनको नीति नियम अनुरुप आम जनताको सहयोगी भएर काम गर्ने छु । प्रहरी कार्यालयमा आएका जनताका समस्याहरुको निष्पक्ष र सहज वातावरणमा समाधान गर्ने छु । प्रहरीले सेवाग्राहीलाई दिनु पर्ने हरेक सेवा सहज रुपमा प्रदान गर्नु हो । समाजमा लागु औषध व्यापार, वालविवाह, महिला हिंसाका घट्ना र अपराधिक गतिविधिहरुलाई नियन्त्रण गर्न म कुनै कसर बाँकी राख्दिन ।
#शान्ति सुरक्षा #नेपाल प्रहरी
बुधवार, फाल्गुन ७, २०७६, ०८:०२:००